"Waa Inaad Taageertaan..." - Pep Guardiola Oo Ciyaartoyda Man City U Sheegay Kooxda Ay Taageerayaan Finalka Champions League Ee Real Madrid vs Liverpool - GOOL24.NET
“Waa Inaad Taageertaan…” – Pep Guardiola Oo Ciyaartoyda Man City U Sheegay Kooxda Ay Taageerayaan Finalka Champions League Ee Real Madrid vs Liverpool
Ciyaartoyda iyo tageereyaasha Manchester City ayaa loo sheegay kooxda ay taageerayaan finalka Champions League ee Sabtida ee Real Madrid iyo Liverpool, taas oo imanaysa toddobaad kaddib markii ay City horyaalka Premier League kaga guuleysatay Liverpool.
Manchester City ayaa xafiiltan adag kala kulantay Liverpool, waxaana ciyaartii ugu dambaysay ay ku sigteen inay horyaalka lumiyaan markii ay Aston Villa laba gool kala hormartay, balse saddex gool ay waqti dambe ka dhaliyeen taas oo haddii laga badin lahaa amaba ay barbarro geli lahaayeen ay horyaalka ku guuleysan lahayd Liverpool oo dhibic kaliya ka dambaysay.
Tababare Pep Guardiola ayaa ooyey markii ay ciyaartu dhamaatay ee ay kooxdiisu ku guuleysatay horyaalka Premier League, waxaana la arkayey iyadoo ay indhihiisa ilmadu qoysay oo iska masaxaya.
Sidaas oo ay tahay, Pep Guardiola oo u dhashay waddanka Spain oo ay ka dhisan tahay Real Madrid, waxa uu ciyaartoydiisa iyo taageereyaashaba la wadaagay kooxda uu doonayo inay taageeraan finalka Champions League, mana aanu noqon mid xaasid ah oo xafiiltanka iyo hirdanka horyaalku uu saamayn ku yeeshay, taas beddelkeedana waxaabu doonayaa in Champions League uu yimaaddo England oo ay Liverpool ku guuleysato.
Guardiola waxa uu ciyaaartoyda kooxdiisa u sheegay, in finalka Champions League ay garab istaagaan kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester City oo ay taageeraan si ay ugu guuleysato tartanka Champions League. Waxa kale oo uu farriintaas oo kale u diray taageereyaasha Manchester City oo uu ku wargeliyey inuu ka doonayo inay taageeraan Liverpool.
“Waligay ma arag koox sida Liverpool oo kale ah intii aan noolaa. Way na caawiyeen si aanu u noqono koox wanaagsan, xilli-ciyaareedba xilli-ciyaareedka xiga.” Ayuu yidhi Guardiola oo sharraxayay sababta uu u doonayo in Liverpool ay ku guuleysato Champions League.